Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 10)
Aynu baranno sida qasabadda loo kala saari karo
2020 / 08 / 21 6517
Marka loo eego hawsha waxaa loo qaybin karaa: berkedda, saxanka qubeyska, qubeyska, qasabadda saxanka jikada iyo tuubbada korantada (faashadda kululeeyaha biyaha korontada ku shaqeeya). Iyadoo la hagaajinayo heerarka nolosha, t ...
Arrimahani waxay go’aamiyaan qiimaha tuubada
2020 / 08 / 20 7977
1. Muuqaalka Dusha sare ee tubbada guud ahaan waa la xiray. Dahaadhida alaabtu waxay leedahay shuruudaha nidaamka la cayimay, iyo wakhti cayiman ka dib tijaabada buufinta milixda. Wax daxalaysi ah kuma dhexjiro ...
Isha Ugu Weyn ee Sunta Wasaqda Dayactirka Maaha Guddiga, Xilliga Latex, Laakiin kani?
2020 / 08 / 20 8218
Wareegga Guriga Nadaafadda Waxaan wada ognahay inaadan u soo guuri karin guri isla marka la cusboonaysiiyo ka dib maxaa yeelay waxaa jiri doona waxoogaa wasakh ah, halkeese wasakhdani ka timid? Waxaan ...
Qubeyska lama isticmaali karo wax ka badan shan sano
2020 / 08 / 20 7186
1, Nolosha shelf: qasabada ugufiican ee lagu badalo in kabadan shan sano oo qasabad Marka laga hadlayo qasabadaha biyaha la cabbo, si kasta oo tayada ufiican tahay, waxay u miridhidoonaan heerar kala duwan waqti ka dib, taas oo i ...
U fiirso dayactirka tuubbada qaboobaha!
2020 / 08 / 20 7815
Tuubada isticmaalka deegaanka ayaa ka hooseysa 0 crack dildilaac dillaac ah, guud ahaanna waxaa sababa xaaladaha soo socda. Kadib tijaabinta bilowga ah ee mashruuca, biyaha haray tuubada ma ...
Ma taqaanaa hormarinta agabka tubooyinka
2020 / 08 / 20 7182
Tan iyo markii la soo saaray qasabadaha casriga ah, iyadoo la kobcinayo dhaqaalaha iyo sayniska, waxaa jiray bir bir ah, dhaman-caag ah, dhan-naxaas ah, daawaha, dhoobada, birta birta ah iyo walxo kale sida ...
Waa maxay sababta qiimaha qasabadaha ay aad ugu kala duwan yihiin
2020 / 08 / 20 8888
Dooro tubbo sax ah ayaa nolosheena hagaajin doonta
2020 / 08 / 19 9017
Marka hore, curinta qasabadda. Waxaan 'arkay' qasabado badan, laakiin ma aqaan inta aad ka ogtahay dhismaha qasabadda. Guud ahaan, qasabadaha ayaa loo qaybiyaa f ...
Sida loo xaliyo qulqulka tuubada
2020 / 08 / 19 9015
Aynu ku bilowno xidhitaanka waalka ka baxa ka dibna ka qaadno tubbada. Marka hore fiiri dhismaha, waxaa jira giraan caag buluug ah oo ka hooseeya. Ka saar faraantiga cinjirka marka hore, ka dibna taabo dow ...
Ma taqaanaa sirta ah iibsashada tubooyinka jikada?
2020 / 08 / 19 8070
Ugu horreyntii, qasabadda jikada waxaa loo rogi karaa illaa 360 °. Si loogu sahlanaado, tuubada jikada waa inay ku jirtaa meel sare oo leh dheecaan dheer. Fikrad ahaan, waa inay ka sii dheereysaa dhuumaha bulaacada iyo ...
Maxaa sameeya biyo nadiif ah oo biyo badbaadin leh
2020 / 08 / 19 8117
1 Valve spool Inta badan qalabka wax lagu dhejiyo ee qasabadaha ku shaqeeya waxay isticmaalaan birta birta lagu baaro iyo qalabka dhoobada. Qalabka birta ee birta birta waa adag oo waara, adkeysi cadaadis xoog leh, laakiin qashinka ...
Nooc noocee ah ayaa fiican
2020 / 08 / 19 8184
1, Miisaannada qasabadda oo laga sameeyey naxaas hubaal way culus yihiin. Maxaad u dooraneysaa qasabad naxaas ah? Sababtoo ah qasabadaha naxaasta ah ayaa xakameyn kara bakteeriyada E. coli ee biyaha ku jirta, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo naxaas, iyo b ...